Maxaa dhaliyay qaraxii weynaa ee ruxay Magaalada Beyrut? | warsanradio baydhabo
Dhageyso:-Barnaamijka Beeraha Qeybtiisa 11 aad
Nabadoon caan ah oo Caawa lagu dilay magaalada...
Soomaaliya oo u yeeratay safiirkeeda Kenya, danjiraha Kenyana...
Sucuudiga oo xidhxidhay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaan...
Wasaaradda waxbarashada XFS oo soo bandhigtay waxbarasho lacag...
Maxaa ka jira warka sheegaya in Musharax Mustaf...
Beesha Caalamka Oo Baaq U Dirtay Madaxda DFS...
Home WARARKA MAANTA	Maxaa dhaliyay qaraxii weynaa ee ruxay Magaalada Beyrut?
Maxaa dhaliyay qaraxii weynaa ee ruxay Magaalada Beyrut?
written by Admin 05/08/2020
Lubnaan ayaa gashay xaalad murugo ah, kadib markii qarax weyn oo ka dhacay caasimadda Beyrut uu dilay ugu yaraan 78 qof, halka dhaawacuna ka badan yahay 4,000.
Qaraxa oo ka dhacay dekadda magaalada ayaa ruxay caasimadda oo dhan. Madaxweyne Mishaal Cown ayaa sheegay in 2,750 tan oo ah maadada ammonium nitrate si aan ammaan ahayn loogu keydiyay makhaasiin halkaa ku yaallay muddo lix sano ah.
Qoraalka sawirka,Qaraxa ayaa burburiyay qeybo badan oo kamid ah Beyrut
Cisbitaaladda ayaa waxaa buux dhaafiyay dhaawacyada, waxaana qaraxa uu gebi ahaanba dhulka dhigay dhismayaal badan.
Weriye ka tirsan BBC-da oo goobta tegay ayaa sheegay in meydad badan oo halkaa yaallay iyo burburka dhismayaasha ay ka dhigeen dekadda magaaladaasi mid aan la geli karin.
Qaraxa ayaa ku soo beegmay xilli xasaasi u ah Lubnaan, iyadoo dhaqaale xumida taagan ay sii kala fogeysay bulshada. Sidoo kale, Jimcaha ayaa la filayaa in maxkamad ay go’aan ka gaarto dilkii ra’iisal wasaarihii hore ee waddankaasi, Rafiiq Xariiri loo geystay 2005.
Maxaa dhaliyay qaraxa?
Mas’uuliyiinta Lubnaan ayaa sheegay in baaritaannada hordhaca ah ay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa shil ee aan si ula kac ah loo fulin.
Wasaraadda arimaha gudaha ayaa sheegtay in maadama ammonium nitrate ee sida weyn u qaraxda lagu keydiyay makhaasiin ku yaal dekadda.
Ra’iisal wasaare Xasan Diyaab ayaa qaraxa ku tilmaamay musiibo, waxaana uu wacad ku maray in lagula xisaabtami doono kuwa mas’uulka ka ah.
Waxa uu ka hadlay “makhaasiin khatar badan” oo dekadda ku yaallay tan iyo 2014, balse waxa uu intaa raaciyay in aanu ka hordhici doonin baaritaanka.
Mas’uul ka tirsan dowladda Israa’iil ayaa BBC-da u sheegay in dalkiisa aanu wax lug ah ku lahayn qaraxa Beyrut.
Qoraalka sawirka,Qaraxa maadada ammonium nitrate ayaa hawada ku sii deyn kara gaas sun ah
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in dad ay weli ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. Qaraxa ayaa laga maqlay jasiiradda Khubrus oo Beyrut u jirta ilaa 240 KM, kuna taal Bariga Mediterranean-ka.
Madax badan oo caalamka ah ayaa ka tacsiyeeyay musiibada halkaa ka dhacday. Ra’iisal wasaaraha UK, Boris Johnson, ayaa bartiisa Twitter ku qoray: “Sawirrada iyo muuqaallada caawa ka imanaya Beyrut waa kuwo argagax leh. Waxaan u duceynayaa dhammaan dadka ku waxyeelloobay dhacdadaasi argagaxa leg.” Waxa uu intaa raaciyay in dowladdiisa ay hiil iyo hooba la garab taagan tahay shacabka Lubnaan.
Xaaladda Lubnaan qaraxa ka hor
Xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan Lubnaan, waxaana dhacay mudaharaadyo looga horjeedo qaabka ay dowladda u maareysay dhaqaale xumida dalkaasi ka taagan oo ah tii ugu darneyd tan iyo dagaalkii sokeeye ee socday 1975-1990.
Inta badan shacabka ayaa dhaqaale xumida u aaneynaya madaxda dalka mudada soo hogaaminayay ee keeni waayay isbedal xal u ah dhibaatooyinka waddankaasi ragaadiyay. Shacabka dalkaasi ayaa la tacaala koronto la’aan, biyo yari iyo daryeelka caafimaadka oo liita.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhaw halkii lagu beegsaday ra’iisal wasaarihii hore Rafiiq Xariiri oo 15 sano ka hor lagu dilay gaari waxlaha qarxa laga soo buuxiyay
Maxaa dhaliyay qaraxii weynaa ee ruxay Magaalada Beyrut? was last modified: August 5th, 2020 by Admin
Qaraxyadii ka dhacay Lebanon Khasaaraha oo sii kordhaya iyo dowladda oo dalbatay gurmad caalami ah
Madaxweyne Lafta Gareen oo Muqisho kula Kulmay ku-xigeenka 1-aad Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (Sawirro)
AKHRISO:-CAAWA & MUQDISHO: CIIDAMO LA DHIGAY WADOOYINKA CAASIMADDA & OLOLEYAASHII UGU DANBEEYAY OO SOCDA
Dhageyso Wareysi Aan la yeelaney Gudoomiye xigeenka Dooynunay xakariye cali yarow
Dhageyso:-Jamacad Laga Furay Baydhabo Kana Soo Horjeestay,
WHO oo ka digtay khafiifinta xayiraadaha Fayraska Korona
Akhriso:-Dowladda UK oo Safiir cusub u soo magacawday Soomaaliya, kaasoo bisha soo socota ee February 2019 xilka la wareegi doona.
Akhriso:- Soomaaliland oo xiriirka u jartay dowladda Qatar
Mid ka mid ah Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed oo is casilay
Atoorihii Caanka ahaa ee Sean Connery oo geeriyooday